सुनको मूल्यमा भारी बृद्धि - नेपालबहस
गृहपृष्ठ अर्थ/व्यापार सुनको मूल्यमा भारी बृद्धि
२८ कार्तिक काठमाडौं । साताको पाँचौ दिन बिहिबार सुनको मूल्यमा भारी बृद्धि भएको छ । बुधबार छापावाल सुनको प्रतितोला ७१ हजार चार सयमा कारोबार भएकोमा बिहिबार प्रतितोला ७२ हजार कायम भएको हो । यो मूल्य तोलामै एकै दिन छ सयले बृद्धि भएको हो ।
बिहिबार छापावाल सुन प्रतितोला ७२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार ७१ हजार चार सय रुपैयामा कारोबार भएको सुनको मूल्य ७२ हजारमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निर्देशक राजेन्द्र तुलाधरले जानकारी दिए ।
यसअघि २०७६ भदौ ९ गते सुनले नयाँ मूल्यको रेकर्ड कायम गरेको थियो । त्यतीबेला सुनप्रतितोला ७३ हजार पाँच सयमा कारोबार भएको निर्देशक तुलाधरले जानकारी दिए । बिहिबार कारोबार भएको सुनको मूल्य कात्तिक महिनाकै उच्च हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी
अघिल्लो लेखभित्रभित्र ”तुम्हारा हैं ”-जनता झुक्काउन “हमारा हैं ” कालापानी भन्दैछ सरकार !
अर्को लेखपोखरामा पुगे राष्ट्रपति हमिद, फेवातालको सुरक्षा व्यवस्था कडा
सुन तोलामा ९१ हजार सात सय रुपैयाँ !
सुनको मूल्य तोलाको ९० हजार ६ सय रुपैयाँ !
सुनको मूल्य उकालो, तोलामा ८९ हजार ६ सय !
सुनकाे मूल्य तोलामा ८८ हजार ६ सय रुपैयाँ !
सुनको भाउ तोलाको ८७ हजार ४०० पुग्यो
शेयर बजार जेठ २० गतेसम्म बन्द हुने